Burcad badeed Soomaali ah oo weeraray Markab Dagaal – SBC
Burcad badeed Soomaali ah oo weeraray Markab Dagaal
Ciidamada la dagaalanka Burcad badeeda Soomaalida ee Midowga yurub ayaa sheegay in 24-kii saac ee la soo dhaafay ay la kulmeen weerar lagu soo qaaday mid ka mid ah maraakiibtooda dagaalka ee joogta Xeebaha Soomaaliya.
Warka ka soo baxay ciidamada Badda ee Midowga yurub ayaa lagu sheegay in Koox hubeysan oo ah burcad badeed Soomaali ah ay weerareen Markab dagaal oo laga leeyahay wadanka Spain kaasi oo marayay Xeebaha u dhow Soomaaliya.
Warsaxafadeed ka soo baxay Ciidamada Badda ee Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in Ciidamada Markii ay la kulmeen rasaasta Burcad badeeda ay ku jawaabeen rasaas xoog leh taasi oo sababtay dhaawac soo gaaray qaar ka mid ah burcadii Soomaalida.
Shan ka mid ah Kooxaha Burcad badeeda Soomaalida ayaa dhaawacmay oo laba ka mid ah ay daruuri noqotay inay helan daweyn degdeg ah ka dib markii dhaawac khatar ah uu soo gaaray intaasi ka dibna waxaa kooxda burcada la saaray oogada Markabka dagaalka halkaasi oo lagu siiyay daweyn.
Markabka dagaal ee lagu weeraray xeebaha soomaaliya oo lagu magacaabo ESPS Patino ayaa ka soo laabtay dekada Magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalka Halkaas oo uu gaarsiiyay Markab Siday Shixnad gargaar ah
Ciidamada badda ee Spian ma sheegin sida laga yeelayo Burcad badeeda shanta ah ee ay qabteen inay sii deynayaan iyo inkale wallow ay soo baxeyso qeyla dhaan ka soo baxaysa Burcada Soomaalida oo ku aadan in mid ka mid ah asxaabtooda ay badu liqday markii uu weerarku socday.